Ungayinakekela kanjani idolo elihlangene?
Yize ukuzivocavoca kungasiza ngokomzimba, kepha uma ngingathathi izinyathelo zokuzivikela ngenkathi ngivivinya umzimba, kungadala ingozi ezithile. Ikakhulu kwimidlalo efana nokudlala imidlalo enomthelela omkhulu, ithuba lengozi likhulu, futhi ukulimala kwedolo kuvame ukuba kukhulu, ngakho-ke ungalinakekela kanjani idolo eli-spraised? Futhi sikukhahlela kangakanani kuze kube nini edolweni? Ukuze uthole i-ellomalacia ye-patellar, kuyadingeka yini ukusebenzisa amaphampu wamadolo? Ake wethule kuwe.
Ungayinakekela kanjani idolo elihlangene
Uma unedolo elixegayo, udinga ukuphathwa ngendlela ehlukile. Ngaphezu kwalokho, ngemuva kwe-sprain, ama-X-ray ngokuvamile kudingeka ukuthi ahlole ukusatshalaliswa okuhlangene. Uma kune-dislocation, kufanele isethwe kabusha kuqala. Vele, ungadla amaphilisi athile wokushaya futhi usebenzise uwoyela we-safflower noma amanzi wethambo ukuze ubambisane nokwelashwa. Kungenziwa kuhlanganiswe nomuthi waseShayina wokusebenzisa ukujikeleza kwegazi nokususa i-stasis yegazi ngokuhlungwa kwangaphakathi kanye nokusebenza kwangaphandle.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukukhahlela idolo
Kungenzeka kube nezingozi ezithile lapho kudlala ibhola, futhi kubalulekile kakhulu ukuthwala amadolo ethu lapho sidlala ibhola. Ukuvela okuyingozi kuhlala kungenakwenzeka ukukuvimbela, futhi uma idolo seligwetshiwe, kuthatha ezimbili noma ezintathu Kungalapheka ezinyangeni. Ngakho-ke, ukugqoka amaphinifa edolo kubalulekile lapho udlala ibhola. Ukugqoka amaphara edolo lapho udlala ibhola kungavikela amadolo akho ekulimaleni okungadingekile. Kusiza ukugaqa kwamadolo, ukuze idolo lize lilayishwe kakhulu lapho kudlalwa ibhola. I-XiPin ingasiza kakhulu ezinkingeni zomthwalo nokushayisana kokudlala i-badminton. I-XiPin iyisinqumo esihle kakhulu semikhiqizo yama-knee brace. Akukho lutho olungahambi kahle ngokukhetha iXiPin ebholeni.
Patella uthambisa ngamapedi edolo
Eqinisweni, ukugqoka amabhulukwe edolo kuhle kakhulu ukuvikela amadolo ethu, ngoba uma i-patella ithamba, izothinta nokuhamba kwemizimba yethu, ngakho-ke udinga ukukhetha ibhande lokuvikela elingcono. Lapha, umhleli uncoma amaphakethe we-XiPin wedolo kuwo wonke umuntu. Njengomkhiqizo wabavikeli bezemidlalo, iXiPin ibilokhu inedumela elihle futhi inesipiliyoni esihle uma isetshenziswa. Lapho sikhetha pads yamadolo, sidinga ukukhetha izinhlobo ezilula ukuzisebenzisa futhi ezingadlala umphumela omuhle wokuvikela. Ama-XiPin amadolo amadolo ayisinqumo esihle.
Isikhathi sokuthumela: Oct-12-2019